मन्त्री आलेले बाँडेको सिलिन्डरमा नयाँ ट्विस्ट, बिल नक्कली भएको दाबी फेरि भाइरल - Khabar Nepali
होमपेज / Special and Breaking / मन्त्री आलेले बाँडेको सिलिन्डरमा नयाँ ट्विस्ट, बिल नक्कली भएको दाबी फेरि भाइरल
मङ्गलबार, जेठ ११, २०७८	, खबरनेपाली संवाददाता
सोमबार दिउँसोबाट वनमन्त्री प्रेम आलेको तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएका छन् । निलो रंगका अक्सिजन सिलिण्डरमा मन्त्री आलेका तस्बिर टाँसिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा चीनवाट अनुदानमा ल्याइएका अक्सिजन सिलिन्डरमा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेको तस्बिर टाँसेको भनेर भाइरल बनाइयो । उनको तस्बिर राखेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भयो । तर वास्तविकता नबुझि आफ्नो आलोचना भएको भन्दै मन्त्री आलेले दुख ब्यक्त गरेका छन् । उनले ब्यक्तिगत लगानीमा आफुले किनेका सिलिण्डर हस्तान्तरण गरेको बताएका छन् । उनले किनेको बिल भनेर रसिद समेत सार्वजनिक भएको छ ।
त्यस्तै मन्त्री आलेले व्यक्तिगत खर्चमा सिलिन्डर खरिद गरेर कैलाली र डोटीमा वितरण गरेको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री आलेले सोमबार डोटी अस्पतालको लागि ७५ सिलिन्डर अक्सिजन हस्तान्तरण गरेको सचिवालयले बताएको छ । तीमध्ये १५ सिलिन्डर अक्सिजन स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएको र अन्य आफैले व्यक्तिगत खर्चमा किनेको उनका प्रेस सल्लाहकार विमल विष्टले बताएका छन् । डोटीमा मात्रै मन्त्री आलेले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा ६० सिलिन्डर अक्सिजन , ४ वटा अक्सिजन कन्टेनर र १ लाख ५० हजार सर्जिकल मास्क वितरण गरेका थिए ।
मंगलबार सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीलाई पनि मन्त्री आलेले ५० सिलिन्डर अक्सिजन दिएको विष्टले बताए । उनले वास्तविकता नबुझि सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिएको भन्दै दुख ब्यक्त गरेका छन् । मन्त्री आलेले व्यक्तिगत लगानीमा ११० सिलिन्डर अक्सिजन वितरण गरेको बताइएको छ । कांग्रेस,माओवादी र एमालेको माधव नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले सामाजिक सन्जालमा अनुदानको सिलिण्डरमा मन्त्रीको फोटो टाँसेको भनेर प्रचार गरे पनि वास्ताविकता त्यस्तो नरहेको सचिवालयको भनाइ छ । एमाले कार्यकर्ताले मन्त्रीको निजी खर्चमा किनिएका सिलिण्डर लगायत स्वास्थ्य सामाग्रीमा मन्त्रीको स्टिकर टाँसेको बताइएको छ ।
तर दिन बित्दै जाँदा यो कुरामा पन नयाँ ट्विस्ट आएको छ । मन्त्री आलेले अक्सिजन सिलिन्डर किनेको भनेर सार्वजनिक गरेको बिल नै नक्कली भएको दाबी सहित अहिले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । मन्त्री आलेले किनेको भनेको भ्याट बिलमा सामान्यतया बजारमा पाइने भन्दा बढि दर मात्रै तिरिएको देखिएको छैन कि सरकारले छुट दिएको कर पनि तिरेको देखाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा नारायण वैद्यले लेखेका छन् – सरकारले दिएको सिलिण्डरमा आफ्नो नामको स्टिकर टाँसेका बनमन्त्री प्रेम आलेले अर्को अनैतिक काम पनि गरेका छन् । उनी आफ्ना चाटु-पत्रकारहरु मार्फत यो नक्कली भ्याट बिल मिडियामा प्रसार गरिरहेका छन । यो BIDH management ltd. ले कुन मितिमा कहाँबाट सिलिन्डर किन्यो ? खरिदकर्ता प्रेमबहादुर आलेले रु. १५ लाख ५९ हजार नगद त नतिरेका होलान् , किनकी , यति ठूलो रकमको कारोबार चेकबाट मात्रै गर्नुपर्ने नियम छ । चेकबाट भुक्तानी भएको भए प्रेमबहादुर आलेको नाममा रहेको कुन बैंकको खाताबाट भयो ? BIDH management ले आफ्नो कारोबारको भ्याट- बिबरण हाल्दा यो कारोबार देखाउछ कि देखाउदैन ? त्यत्ती बुझ्दा साँचो/ झुटो पत्ता लाग्छ । र , सबैभन्दा अचम्म , नेपालमा औषधिमा भ्याट लाग्दैन । कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने अक्सिजन सिलेण्डरमा भ्याट नलाग्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। यो बिल हेर्दा सिलिन्डरको मुल्यमा भ्याट जोडिएको छ । हतपतको काम लतपत भयो , नक्कली हो भन्ने देखियो ।
यसबारे भने मन्त्री आलेको तर्फबाट वा उनको सचिवालयबाट केहि पनि जवाफ आइसकेको छैन ।